Iyiphi indlela ephumelela kakhulu yokutadisha? | Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ngokuya kocwaningo olwenziwe yi-University of Lausanne neWashington oluqhathanisa izindlela ezehlukene zokutadisha, imiphumela emihle kakhulu ingabangelwa ukushintshaniswa kokufunda nokubuyiselwa kwamadoda.
Ulapha: Ikhaya » Okwabazali » Funda kangcono » Iyiphi indlela ephumelela kakhulu yokutadisha?
I- "Repetita iuvant" (izinto eziphindaphindwayo ziyasiza) isisho sesiLatini, kodwa ingabe kunjalo ngempela? Ngokwemiphumela yocwaningo olwenziwe ngokuhlangana yiNyuvesi yaseLausanne neWashington bekungathiwa yebo.
Iqembu lezitshudeni lafaka abafundi abangama-80 esivivinyweni lapho beqhathaniswa ukusebenza kokufunda kombhalo wesayensi ezimweni ezine ezahlukahlukene:
Ukufundwa kombhalo ngeseshini eyodwa;
Ukufundwa kombhalo ophindaphindwe izikhathi ezine;
Funda ngokudalwa kwemephu ebonakalayo eyayizokwakhiwa izitshudeni ngemuva kwesifundo sokuqala;
Ukutadisha ngokubuyiselwa kolwazi olufundiwe, lapho abafundi, ngemuva kwesifundo sokuqala sokufunda, kuye kwadingeka bazame ukukhumbula imiqondo eminingi ngangokunokwenzeka. Ngemuva kwalesi sigaba sokululama se-mnemonic, abafundi babenomsebenzi wokufunda kabusha nokuphinda kusebenze.
Kubalulekile ukugcizelela ukuthi kuzo zontathu izimo zokuhlola isikhathi esichithwe ekutadisheni sasilingana.
Ngemuva kwesonto abafundi babeka imibandela eyehlukene (yilowo nalowo kulawa amane) bahlolwa ukubona ukuthi yini abayifundayo, bobabili ngemibuzo ehlobene nemiqondo ekhona ngqo embhalweni, kanye nemibuzo engenasisekelo.
Naphezu kwalokho obekulindelekile, ukusebenza okuhle kakhulu atholakala eqenjini elalifunda ukushintshana kwezigaba zokufunda ne ukululama kwe-mnemonic. Kwakumangaza ngokulinganayo ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwalolu cwaningo kusizwe ngokwenziwa kwamamephu emiqondo zazingabukeki zingcono yalawo atholwe ngokumane ufunde umbhalo (wesikhathi esilinganayo).
Yize imiphumela yocwaningo olulodwa kufanele ithathwe ngokuqapha okuqhubekayo ngentuthuko, konke lokhu kuhamba ngokusobala nokucabanga (okuvame ukuthathwa kalula) ukuthi ukudalwa amamephu emiqondo yisinqumo esihle kunazo zonke ocwaningweni.
Ngaphezu kwalokho, le mininingwane isiza ukunikeza umbono wokuthi izindlela eziyinkimbinkimbi futhi ezibuthakathaka zokufunda zilunge kangakanani nokuthi kunakekelwa okungakanani okufanele kwenziwe ekuthuthukiseni amasu okusondela emisebenzini, ikakhulukazi phambi kwezingane ezibonisa ubunzima obuthile. Endabeni yokugcina, eqinisweni, kungafaneleka ukuqonda uhlobo lobunzima futhi "usike" indlela yokufunda kulinganiswa ngobunzima namandla emuntfu.
IKarpicke, i-JD, ne-Blunt, i-JR (2011). Ukubuyisa Umkhuba Kukhiqiza Ukufunda Okungaphezulu Kokufunda Okucwengekile Ngomqondo Wemephu. Isayensi, 331: 771 - 775.
amamephu emiqondo, indlela yokutadisha, ukuphindaphinda
Iyiphi indlela ephumelela kakhulu yokutadisha?2015-03-242020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2014/12/a002574406-scuola_studio_libriR400.jpg200px200px
Ibaluleke kangakanani izakhi zofuzo esikoleni?Ukufunda, Indlela Yokufunda, Neuropsychology
Imithetho eli-10 yokufunda okuhleIndlela yokutadisha, Funda kangcono